Mogadishu Journal » Taliska ciidamada xoogga oo beeniyay in uu boob ka dhacday Xeradii Imaaraadka
Mjournal :-Taliska Ciidamada xoogga dalka ayaa beeniyay warar ay baahiyeen qaar ka mid ah Warbaahinta oo ahaa in bililaqo iyo boob ay ka dhacday xarunta Tababarka Jen. Gordon oo ay maamulayeen Imaaraadka Carabta.
Imaaraadka Carabta ayaa shalay ka raratay dhamaan agabkii iyo qalabkii Tababar ee xeradaas u yaallay, kaddib markii ay go’aansadeen inay joojiyaan howshii tababarka iyo taageerada Ciidamada.
Taliyaha Hoggaanka Siyaasadda iyo Wacyigelinta ciidanka xoogga dalka G/sare C/xamuud Sheekh Cali Xaydar ayaa sheegay in wararka ay baahiyeen Idaacadaha Muqdisho uu yahay mid aan waxba ka jirin.
“Wax iska hor imaad ah iyo boob ka dhacay xerada ma jirto, Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka ayaa xerada booqday, Tababarayaashii iyo ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa hada ku sugan xerada”ayuu yiri.
Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sheegtay inay la wareegtay Mas’uuliyadda dhamaan Ciidamadii ay tababareen Imaaraadka Carabta, wixii hada ka dambeeyana ay bixin doonaan mushaaraadkooda
Imaaraadka Carabta ayaa maanta joojiyay howlihii Labo Isbitaal iyo Xeradii Ciidamada ay ku tababarayeen, halkaasoo ay ka saareen dhamaan Tababarayaashooda.